Raisal wasaaraha Dalka Oo Kahadlay Nabadgelyada Deegaanka - Cakaara News
Raisal wasaaraha Dalka Oo Kahadlay Nabadgelyada Deegaanka
Shiniile(CN) Arbaco 14ka October 2015, Mar uu lahadlayay shacabka gobolka Sitti iyo warbaahinta ayaa waxaa hadaladii raisal wasaaraha dalkeena itoobiya mudane Hailemariam Desalegn kamid ahaa''anigoo kuhadlaya magacayga, magaca dawlada federalka ah iyo magaca qowmiyadaha kale ee dalka ayaa waxaan amaan usoo jeedinayaa qowmiyada soomaalida itoobiya ee sharafta mudan iyo xukuumada wakhtigan xaadirka ah haysa talada deegaanka sida iyagoo iskaashanaya ay uga hirgaliyeen deegaanka horumar waara iyo nabadgelyo taam ah taariikhda markii ugu horaysay''
Raisal wasaaraha ayaana kutilmaamay in xukuumada maanta hogaamisa deegaanka ay kago'antahay nabadgelyada, horumarka iyo xidhiidhka dadwaynaha intuba isagoo tusaale usoo qaatay in xukuumadihii hore aysan 30 birr waligood horumar galinin iskadaa 300 milyan oo birr oo maanta biyo-xidheeno lagu samaynayee. Balse, ay ahaayeen kuwo iyagu isku mashquula oo taageerana siiya nabadiidka, aragti shacabna aan lahayn. Xukuumada maantase waa mid aragti shacab leh oo dadkeeda unugul aadna ugu damqanaysa oo kabihii shacabka ah.
Dhanka kale, raisal wasaaraha ayaa sheegay in deegaanka aysan maanta wax UBBO ah kajirin oo shacabka iyo xukuumada deegaanka oo iskaashanaya ay afka ciida udareen ubbo.
Ugudanbayna, Curadada(salaadiinta)gobolka Sitti caanka ka ah ee ixtiraamka, sumcada iyo qadarinta kuleh bulshada dhexdeeda oo ay kamid yihiin:Curad mudane Xaaji Muuse Maygaag Barre, Xaaji Maxamuud Tukaale, Xaaji Maxamed Magare iyo qaar kale ayaa si gaar ah ugu amaanay Raisal wasaaraha dawlada federaalka ah mudane Hailemariam Desalegn wakhtigiisa qaaliga ee uu uhuray inuu halkan inagula wadaago xaalada gobolka kajirta. Waxayna odoyaashu usheegeen raisal wasaaraha inay horayna udoorteen hadana ay halkan ku doorteen isaga iyo madaxwaynaha deegaankaba. Waxaa kale oo ay amaaneen madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka mudane Cabdixakiin Cigaal oo in badan kunoqnoqday gobolka isagoo hogaaminaya gudiga abaaraha deegaanka islamarkaana lasoo seexday shacabka goob kastoo abaaruhu kadhaceen.
Odayaasha ayaana hadalkoodii kusoo xidhay in xukuumada federaalka ah iyo ta deegaanku ay sii labajibaaraan dadaaladii iyo waxqabadkii ay wadeen maadaama oo xili jiilaal ah lagalayo